राज्यप्रति आक्रोश पोख्दा...- समाचार - कान्तिपुर समाचार
फेसबुकमा आपत्तिजनक भिडियो पोस्ट गरेपछि पक्राउ परेका युवा भन्छन्, ‘आगामी पुस्ताले पनि हामीले जस्तै नियति भोग्नु नपरोस् भन्ने सोच्दासोच्दै नेताप्रति औधी रिस उठेर भिडियो बनाएँ । खुकुरी देखाउनचाहिा हुन्थेन कि !’
काठमाडौँ — सबैथोक ठीकसँग चलेको भए बारा जितपुरका २६ वर्षीय सागर मैनाली यतिबेला वैदेशिक रोजगारीका निम्ति मलेसिया जान सुटकेस किनिरहेका हुनेथिए वा विदेश जाँदा के के लैजाने भन्ने सूची बनाइरहेका हुनेथिए ।
आइतबार साँझ उनको समयतालिका खलबलियो जब दुई नौला मान्छे घरमा झुल्किए । ती मान्छे सादा पोसाकमा खटिएका नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारी थिए ।
प्रहरी लिन आएपछि उनी टिसर्ट पहिरेर खुरुखुरु घर नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरमा गए । भोलिपल्ट अर्थात् सोमबार उनलाई जहाजमार्फत काठमाडौं ल्याइयो र साइबर अपराध गरेको आरोपमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइयो । बुधबार प्रहरी परिसर काठमाडौंमा भेटिएका सागरले आफूलाई मुद्दा लाग्नुको पृष्ठभूमि मात्रै सुनाएनन्, आम नागरिकको छटपटीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने केही तथ्य पनि अघि सारे ।
पाँच वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीको तीन वर्षे यात्रा टुंग्याएर मलेसियाबाट फर्केका सागर दुई वर्षयता घरतिरै थिए । उनी दिनगन्तीका हिसाबले गाउँतिरै पाएअनुसारको काम गर्थे । कहिले भेटिने, कहिले नभेटिने कामले उनको गर्जो चलिरहेको थिएन । उनले आफ्नो परिचय दिने बेला सुरुमै भनेका थिए, ‘भाग्य खोटो रैछ । गरिबको घरमा जन्मेँ ।’
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेतालाई अश्लील गाली गरेको आरोपमा सागर पक्राउ परेका हुन् । सागरले आइतबार घरमै मोबाइलले एउटा भिडियो खिचेका थिए, जसमा उनले हातमा खुकुरी उठाउँदै नेताहरूलाई तिखो प्रश्न गरेका छन् र हालै मात्र आत्महत्या दुरुत्साहनको घटनामा अनुसन्धानका निम्ति पक्राउ परेका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको समर्थन गर्दै सोधेका छन्, ‘के नेपालको इतिहास बदलिन्छ ?’
चितवनको नारायणगढस्थित एक होटलमा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलेआत्महत्या गरेपछि र यही मुद्दामा जोडिएर सञ्चारकर्मी लामिछाने पक्राउ परेको र यससँगै उनका पक्षमा सामाजिक सञ्जाल र खासगरी युटयुबमा अनेक सामग्री आएको पृष्ठभूमिमा सागरले नेताहरूलाई अश्लील गाली गर्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
३० सेकेन्डको यही भिडियो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरको सहयोगमा उनलाई पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको हो । प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनीमाथि पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट मंगलबार अनुमति लिइसकेको छ ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सागरले नेताहरूलाई गाली गर्नुको कारण बताउँदै प्रश्न गरे, ‘देशमा लोकतन्त्र आएको दशक भइसक्दा पनि किन दलहरूले केही लछारपाटो लाउन सकेनन् ? माओवादीले परिवर्तनका निम्ति दशक लामो युद्ध लडेर पनि नेपालमा किन केही भएन ? ओलीले ग्यासको पाइप ल्याउँछु भन्थे, ल्याए ? शेरबहादुर त्यति पटक प्रधानमन्त्री भए ? के गरे ?’
आफूले दुई तीनवटा भिडियो खिचेको तर खुकुरी देखाएको भिडियो मात्रै पोस्ट गरेको सागरले बताए । ‘मैले एउटा भिडियोमा त पुलिसलाई पनि गाली गरेको थिएँ । केही पो भइहाल्ला कि भनेर त्यो भिडियो पोस्ट गरिनँ,’ उनले भने । सागरका अनुसार बुधबार उनले पोस्ट गरेको भिडियो दुई घण्टामै १२ सय जनाले हेरेका थिए । भिडियो भाषिक हिसाबले मर्यादित र सभ्य छैन तर भिडियो पोस्ट गरेपछिका दुई दिनमै उनलाई सयभन्दा धेरैको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको थियो ।
एक जना एजेन्टलाई एक लाख २५ हजार बुझाएर मलेसिया पुगेका सागरले त्यहाँ एसी निर्माण कम्पनीमा काम गरेका थिए । दैनिक आठ घण्टा कामबापत उनी मासिक २० हजार रुपैयाँ कमाउँथे । सागरका अनुसार मलेसिया जाँदा जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण निकालेका थिए । ‘झन्डै वर्ष दिनको कमाइ त ऋण तिर्दैमा गयो,’ उनले भने, ‘नेपालमै केही गरी खान मिल्ने भए म किन मलेसिया जान्थेँ ?’
मलेसिया पुगेपछि मात्रै नेपालमा किन विकास हुन सकेन, किन कुनै काम पनि ठीकसँग हुँदैन भन्ने थाहा पाएको सागरले बताए । मलेसियाबाट फर्केपछि देशप्रति माया लाग्न थालेको उनले बताए । उनले डेढ वर्षअघि दाहिने नाडीमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको टयाटु खोपेका छन् र लेखेका छन्, ‘यो मन त मेरो नेपाली हो ।’ सागरले अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको बताए । ‘फेसबुक र युटयुबबाट राजनीतिक कुरा थाहा पाउँछु । रिस मात्रै उठेर आउँछ,’ उनले भने ।
आफ्नो पुस्ता दु:खकै खाडलमा जाकिएको र यसबाट उम्किने उपाय नभएको उल्लेख गर्दै सागरले भने, ‘आगामी पुस्ताले पनि यस्तै नियति भोग्नु नपरोस् भन्ने सोच्दासोच्दै नेताप्रति औधी रिस उठेर भिडियो बनाएँ । खुकुरीदेखाउन चाहिँ हुन्थेन कि !’ उनले थपे, ‘नेताहरूले केही गर्न नसकेरै त हो हामीले खाडीको ४५ डिग्री तातोमा पसिना बगाउनुपरेको ।’
सागर आफू हिंसामा विश्वास गर्ने मान्छे नभएको बताउँछन् । उनले पाखुरामा शिवको टयाटु खोपेको देखाए अनि रातो रंगको भेस्ट अलिक माथि तानेर कम्मरभन्दा माथिल्लो भागमा खोपेको बुद्धको टयाटु पनि देखाए । भिडियोमा खुकुरी नचाएको विषयमा उनको आफ्नै तर्क छ, ‘मैले कसैलाई काट्न मार्न उज्याएको हैन । मैले जसरी सबैले खुकुरी देखाएर खबरदारी गरे नेता सुध्रेलान् कि भनेर हो ।’
सागरले खुकुरी देखाएर गल्ती गरेको स्विकारे पनि नेताहरू बिग्रेका छन् भन्ने अडानमा भने कायमै रहे । उनले सञ्चारकर्मी लामिछानेबारे भर्खरै थाहा पाएका हुन् । उनले युटयुबमा लामिछानेका केही कार्यक्रम हेरेका छन् । ‘दु:ख सुनाउन कहाँ जाने ? सरकारले नसुनेर त रविकहाँ जान पर्‍यो नि । त्यही भएर त्यो मान्छे मन परेको । त्यो मान्छेबारे मलाई अरू धेरै कुरा थाहा छैन,’ उनले भने ।
सागरले लामिछाने पक्राउपछि त्यसको विरोधमा बनाइएका केही भिडियो फेसबुकमा सेयर गरेकोदेखिन्छ तर फेसबुकमा राजनीतिक कुरा वा विचारका पोस्ट देखिँदैनन् ।
मलेसियाको तीनवर्षे कमाइबाट सागरले करिब चार लाख बचाएका थिए । फर्केलगत्तै तामाङ थरकी युवतीसँग बिहे गरे । उनकी पत्नी टिनाले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा आफ्ना श्रीमान् राजनीतिबारे चासो राख्ने मान्छे नभएको सुनाइन् । ‘पुलिसले पक्रेपछि मात्रै त्यस्तो भिडियो हालेको पनि थाहा पाएँ,’ उनले भनिन् ।
बिहेपछि करिब एक वर्ष सागरले काठमाडौंमा रहेको दिदी–भिनाजुको होस्टलमा काम गरे । त्यहाँ मन नअडिएपछि उनी गाउँमै फर्किएका थिए । ६ कक्षा मात्रै पढेका उनले भने, ‘अलि पढया मान्छे पनि परिनँ । त्यही भएर पनि न काम न के भनेजस्तो भयो ।’ श्रीमान् बेकामीमा बसेको देखेपछि मलेसिया पठाउन टिनाले नै पहल थालेकी थिइन् । सागरका दुई बहिनीमध्ये ठूली बहिनी ४ महिनाअघि र कान्छी बहिनी २ महिनाअघि क्लिनरको काम गर्ने गरी दुबई गएका छन् । टिनाले आफू पनि नन्दहरूजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा रहेको सुनाइन् ।
सागरका अनुसार थुनामा नपरेको भए उनी एक सातामौ मलेसिया उडिसक्थे । उनले सरकारले ल्याएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कुरा सुनेका थिए तर सरकारले भनेअनुसार केही नहुने भएकैले म्यानपावर कम्पनीलाई ८५ हजार तिर्ने सर्त स्विकारेर मलेसिया जान खुट्टा उचालेर बसेका थिए ।
उनका कान्छा भाइ भने १ कक्षामा पढ्छन् । सागरको परिवारमा सुखभन्दा धेरै संघर्ष छ । उनकी आमा सीता इलाका प्रशासन कार्यालयमा पियनको काम गर्छिन् । बाबु टिपर ड्राइभर थिए । कान्तिपुरसँगको फोन वार्तामा आमाले सुनाइन्, ‘अहिले त टिपर चलाउने काम पनि नभएर एउटा स्कुलको बस चलाउन पाइन्छ कि भनेर खोज्न हिँड्नुभएको छ ।’ सागरले आफूहरूको जग्गाजमिन पनि धेरै नभएको सुनाए । ‘घर भएको जग्गा रेलवे लिकमा परेको छ भनेका छन् । जितपुरकै अपायक ठाउँमा साढे १४ धुर जग्गा छ,’ उनले भने ।
सरकारसँग रिस उठ्नुको कारण खोतल्ने क्रममा सागरले पुरानो एउटा घटना सुनाए । स्थानीयस्तरमै साथीभाइसँग मिलेर ब्यान्ड पनि खोलेका सागरले पाँच वर्षअघि सिमरामै आयोजित एउटा कन्सर्टमा गीत गाएका थिए । कन्सर्ट सकिएपछि दर्शकका रूपमा रहेका दुई हुल केटाबीच झगडा भयो । उनले सुनाए, ‘झगडा छुट्याउन जाँदा मलाई एउटा भाइले पिटेको आरोप लगायो । यही घटना फैलिँदै गयो र ती भाइका दाइले आएर मलाई मुक्का हाने । बदलामा मैले चिपर्ट प्रहार गरेँ तर प्रहार सही ठाउँमा परेन । यो घटना प्रहरीमा पुग्यो । प्रहरीले मेरो कुरै नसुनी दोषीझैं केरकार गर्‍यो ।’ सागरका अनुसार उनीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही भएन, उनलाई सम्झौता गर्न बाध्य बनाइयो । ‘त्यही दिनदेखि पुलिसले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास उडयो,’ उनले भने ।
सागरकी आमा छोरा पक्राउ पर्नुको कारणबारे उति प्रस्ट छैनन् । उनले भनिन्, ‘गाली देको रे । सरकारलाई हो कि केलाई रे । मलाई रामरी था छैन । अचेलका केटाहरू के भका ? के बोल्दा के हुन्छ पनि थाहा छैन ।’
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०७:११
भाद्र ४, २०७६ सुरेशराज न्यौपाने
नयाँदिल्ली — भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री पी चिदम्बरम पक्राउ परेका छन् । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिबिआई) ले बुधबार साँझ भ्रष्टाचारको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
त्यसपछि सिबिआई र प्रवर्तक निर्देशनालय (इनफोर्समेन्ट डाइरक्टरेट–ईडि) को टोलीले चिदम्बरमलाई पक्राउ गर्न खोजी शुरु गरेको थियो। त्यसका लागि मंगलबार दुई पटकसम्म उक्त टोली उनको निवास पुगेको थियो। तर, उनलाई फेला पार्न सकेको थिएन।
बुधबार बिहान चिदम्बरम पक्षका वकिलहरुले उनी प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ र पूर्वमन्त्री समेत भएकाले विदेश भााग्ने सम्भावना नरहेकको भन्दै जमानतका लागि सर्वोच्च अदालत गएका थिए। तर, सर्वोच्चले मुद्दाको चापका कारण उनको मुद्दाको सुनवाई शुक्रवार अघि हुन नसक्ने आदेश दिएपछि चिदम्बरम पक्राउ पर्ने निश्चित ठानिएको थियो। त्यसपछि पनि उनी कहाँ थिए भन्ने अज्ञात नै थिए।
एकाएक बुधबार साँझ कंग्रेस पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक भएका थिए। उक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै चिदम्बरमले आइएनएक्स मिडिया प्रकरणमा प्रत्यक्ष आरोप नलगाइएको हुँदा मंगलबार राति र बुधबार दिनभर वकिलहरुसँगको परामर्शको व्यस्त रहेको र न्यायिक प्रक्रियाको अपहेलना गर्न नखोजेको प्रष्टिकरण दिएका थिए।
उक्त पत्रकार सम्मेलनपछि उनी आफ्नो निवास पुगेका थिए। चिदम्बरम आफ्नो निवास पुगेलगत्तै सिबिआई र ईडीको टोली उनलाई पक्राउ गर्न त्यहीँ पुगेको थियो। निवास प्रवेश गरेको करीब आधा घन्टापछि सिबिआई र ईडको टोली चिदम्बरमसहित बाहिर निस्केको थियो। चिदम्बरम कम्तिमा पनि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई नहुँदा सम्म सिबिआई मुख्यालयमै रहने छन्।
चिदम्बरम अर्थमन्त्री भएकाले केन्द्रीय वैदेशिक लगानी बोर्डले सन् २००८ मा पिटर र इन्द्रानी मुकर्जीयाको कम्पनी आइएनएक्स मिडियामा विभिन्न तीनवटा मोरिसस कम्पनीबाट करीब ३०५ करोड भारु वैदेशिक लगानीका लागि अनुमति दिएको थियो। पछि राजस्व विभागले त्यो लगानी भित्र्याउँदा सम्पत्ती शुद्धिकरण गरेको र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानूनहरुको पूर्ण पालना नभएको तथ्य फेला पारेको थियो। र, त्यसको छ वर्ष पछि आइएनएक्स मिडियासँग चिदम्बरमका छोरा कार्ति चिदम्बरमको कम्पनीको पनि सम्बन्ध भएको खुलेको थियो।
पछि सिबिआईसँगको बयानमा इन्द्रानीले कार्ति चिदम्बरम र आफूहरुबीच वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि दश लाख डलरको डिल भएको बताएकी थिइन्।
इन्द्रानीको बयानपछि सिबिआईले कार्त्ति चिदम्बरमलाई पनि पक्राउ परेको थियो।
पछि ईडिले कार्ति चिदम्बरमको करीब ५४ करोड भारुको सम्पत्ति आइएनएस मिडिया डिलसँग जोडिएको दावी गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। त्यसपछि ईडी कार्यालयले पि चिदम्बरमलाई पनि पटकपटक सोधपुछ गरेको थियो।
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ २३:०५